अमेरिकाको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति भएकी कमला ह्यारिस को हुन्? – उजेली न्यूज
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १२:२२ November 8, 2020
अमेरिकी निर्वाचनमा इतिहास बनाउन सफल कमला को हुन् त?
भारतीय मूलकी कमला ह्यारिसलाई चिन्न उनकी आमा चिन्नुपर्छ। कमलाले अधिकार र कर्तव्यको चेत हुर्कने क्रममै आमाबाटै पाएकी थिइन्।
उनकी भारतीय आमाले उतिखेरै अधिकारका लडाइँहरूमा छोरीलाई च्याप्दै अघि बढेकी थिइन् भने जीवनमा गुनासो होइन काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि घोकाएकी थिइन्।
बायाँबाट क्रमशः कमला ह्यारिस, बहिनी माया र उनकी आमा श्यामला गोपालन।
कमला ह्यारिस र उनकी बहिनी मायाआमा श्यामला गोपालन (माथिल्लो लहर बीच)र मावली हजुरआमा-बुवाका साथमा। तस्बिरः न्युयोर्क टाइम्स
Previous: ४ महिनामा अख्तियारका ३० ‘स्टीङ अपरेसन’, सहसचिवसमेत पक्राउ
Next: राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले दिए बाइडेन र ह्यारिसलाई बधाई